Dowladda Sri Lanka oo lacag ku taageeraysa qorshaha deyn cafinta Soomaaliya - Awdinle Online
Dowladda Sri Lanka oo lacag ku taageeraysa qorshaha deyn cafinta Soomaaliya
Dowladda Sri Lanka ayaa ku dhawaaqday in ay biirin doonto Rs. 163 milyan oo lacagtaasi dalkaasi ah oo loogu talagalay xirmada maaliyadeed ee Hay’adda Lacagta Adduunka oo lagu oggolaaday deyn Cafinta Soomaaliya.
Hay’adda lacagta adduunka ee IMF bishii Diseembar 2019 waxay ansixisay qorshe maaliyadeed oo IMF ka caawin doona inay daboosho qaybteeda ka bixinta deynta Soomaaliya.
Qaabka culeyska miisaaniyadda ee Hay’adda Lacagta Adduunka waa siyaasad ay ansixisay Guddiga Fulinta ee Sanduuqa Lacagta Adduunka (IMF) 1986 waxaana habkan loo qaatay inuu dib ugu soo celiyo khasaaraha dakhliga sababa la xiriira lacag la’aan xubnahu dartood sababo kala duwan awgood.
Previous articleMaxay kawada hadleen Amiirka Qadar & Farmaajo
Next articleAMISOM oo shaacisay doorkeeda doorashadda 20/21